Ngathi-iWuling (Fuzhou) Biotechnology Co., Ltd.
Eyasungulwa ngo-2003, i-Wuling yinkampani ye-biotech ejolise kwimveliso kunye nokulungiswa kwamakhowa amayeza kunye nezongezelelo zokutya. Iqale kwaye yaphuhliswa e-China, ngoku sinabile saya e-Canada kwaye sibonelela ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo ze-mushroom. Iimveliso zethu kunye namaziko afumene ngokulandelelana ezi ziqinisekiso zilandelayo: USFDA, USDA organic, EU organic, Chinese organic, kosher kunye halal, HACCP kunye ne-ISO22000.
Ezi zatifikethi zingasentla kunye nezinye ezininzi zibonelela abathengi bethu kumazwe angaphezu kwama-40 nakwimimandla ngesiqinisekiso sokuba bafumana awona mgangatho uphakamileyo wamayeza okunyanga kunye neemveliso ezigqityiweyo.
KwiWuling Biotechnology sineehektare ezili-133 zendawo yokulima ngamakhowa, kunye nokulungiswa, amaziko ethu anakho ukukhula nokukhulisa i-10,000 kg ngenyanga. Ukusukela ngo-2003 sikhule kubathengi bethu kwihlabathi liphela kwaye sithumela rhoqo kumazwe angaphezu kwama-40 ahlukeneyo kwihlabathi liphela. Ngokubhekisele ekuthumeleni senza konke okusemandleni ethu ukuthumela ngenqanawa ngexesha kwaye sineqela elikhulu lokulawula oku. Sineqela labasebenzi abangaphezu kwama-75 kwi-R & D, ukuthengisa kunye nemveliso.
Izixhobo zethu zinezixhobo zamva nje zokukhupha, ukomisa, ukugoba, ukudibanisa kunye nokupakisha, sivelisa iimveliso zethu kunye neefomula ngaphezulu kwe-100 kwaye sinokwenza imixube emitsha ukuhlangabezana neemfuno ze-OEM kubathengi bethu. Sinokukunceda ukuba uphuhlise iimveliso ezintsha ngokudibanisa kunye neefomula ukuya kwiipakethe. Sinokuvunywa yi-FDA, isiqinisekiso se-USDA se-organic, isatifikethi se-EU sezinto eziphilayo kunye ne-China organic certification.
U-Wuling uphuhlise kwaye waba nguvulindlela weentlobo ezininzi zeziphuzo ze-mushroom ezisekwe kubathengi bethu, kubandakanya ikofu yama-mushroom, iti yamakhowa, umgubo wesonka se-mushroom kunye nesiselo samandla se-mushroom. Kukhathalelo lobuqu nobuhle, iqela lethu lophando kunye nophuhliso lenze nesepha ephezulu yamayeza amakhowa, izinto zokuthambisa, iimveliso zokucoca kunye neemveliso ezisebenzayo zobuhle.
Yenza ixabiso labathengi ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni.
Ukusukela ekuqaleni kokusekwa kwenkampani, besisoloko sisebenza ekwenzeni ixabiso labathengi bethu ngeemveliso esizithengisayo kunye neenkonzo esizibonelelayo. Ukulawula kuzabalazela ukubonelela abathengi ngeenkonzo zenkxaso ethembekileyo yemveliso, ezinokubandakanya imveliso / ifomula yophuhliso, inkxaso yezobuchwephesha, uyilo lwemifanekiso yobungcali kunye nokupakisha ukubonelela abathengi ngesisombululo semveliso esinye. Ukwenza umthetho kulapha ukunceda abathengi ukuba benze izimvo zabo zohlobo lwangempela.
Iminyaka eli-17 yokusebenza nzima kunye nokwakha uphawu oluqhubekayo.
Siza kuhlala sisebenza nzima ukubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye neemveliso kumaqabane ethu abaliqondayo ixabiso lama-mushroom amayeza, kwaye kunye nabathengi bethu siza kudala ikamva elitsha lamakhowa amayeza!
Kwi-Wuling Biotechnology sineehektare ezili-133 zendawo yokulima ngamakhowa, kunye nokulungiswa, amaziko ethu anakho ukukhula nokukhula kwe-10,000 kg ngenyanga. Ukusukela ngo-2003 sikhule kubathengi bethu kwihlabathi liphela kwaye sithumela rhoqo kumazwe angaphezu kwama-40 ahlukeneyo kwihlabathi liphela. Ngokubhekisele ekuthumeleni senza konke okusemandleni ethu ukuthumela ngenqanawa ngexesha kwaye sineqela elikhulu lokulawula oku. Sineqela labasebenzi abangaphezu kwama-75 kwi-R & D, ukuthengisa kunye nemveliso.
E-Wuling, inqununu yokuqala kuzo zonke iimveliso esizivelisayo kukuba zenziwe kuphela ngomzimba weziqhamo weMushroom njengoko oku ubuninzi bezinto ezisebenzayo zinjalo. Ngawo onke amanqaku kwimveliso sibeka iliso kwimveliso yethu kumanqanaba ezinto ezifanelekileyo ezisebenzayo ukuze ube nakho ukungaguquguquki kunye nokuphakama kwesiseko sezinto ezinamandla okanye imveliso egqityiweyo kuthi.
Nguye kuphela umzi-mveliso kwihlabathi osebenzisa ilungelo lobunikazi laseJuncao lokulima iReishi!